Libaax Baa i Fuulay Neefina Igama Imanin Waa Been, Ruux Garaabo Ruugay oo aan Wareerina Lama Arag [Garaabo] – Rasaasa News
Libaax Baa i Fuulay Neefina Igama Imanin Waa Been, Ruux Garaabo Ruugay oo aan Wareerina Lama Arag [Garaabo]
Jun 16, 2009 Jwxo-shiil
Kaan adkaysanayneen Illahay ogg yahayee ooyi doonow aayar joog, ilaahay amarkii uma gafee `haweenkeenka ragu way bah dilaan` oo waxay dhahaan hebel ilmo dhawaa ma haweenbaa, eega aniguna waxaan lee yahay Garaabo Oohin dhawaa, hadii uu intaa ku filan yahay muxuu kolkii horeba shib u odhan waayey.
Waxaanse jeclahay nin aan akhristayaalka u soo bandhigo Garaabo iyo wax haysta; ninkii aad ogaydeen ee jiif iyo joogba laga waayey waxaa maanta haysata in uu la yahay cid uu aamino, xitaa jwxo-shiiladii ayaa ka carayaa waxaana garaabo ku waashay Telefoon joogta ah, ruux walbana waxaa uu waydiinayaa rasaas.com ma akhritay maxayse maanta qortay ma waxbay iga sheegtay.
Waxaan qabsaday Garyaqaan oo dacwad baan ku wadaa, waxaanan filayaa in koldhaw la xidhi doono, Ilaahayow qofku garasho xumaa, ma wuxuusan ogayn in shaqada ay qabato warfaafintu ay tahay uun wax sheeg mase dambi baa laga galay, isaguse kolka uu caraatamayo ma wuusan garanaynin in uu dadka xanuujinayo.
Hadaanu nahay wadayaasha Bogga rasaas.com, waxaan waydiisanaynaa dadweynaha in ay iska cafiyaan oo ayna qoraalo dambe oo ku saabsan Mr. garaabo noo soo gudbinin, kolba hadii la, ogaaday in uusan wax jira ahayn.
Waxaana ku waaninaynaa dadweynaha akhrista bogga rasaas.com in ay kolwalba xasuustaan in dhibaatada Garaabo iyo kuwa la midka ah haysata ayna ahayn mid la daweyn karo, balse kaliya ay ku xasuustaan Jumladan hoos ku qoran oo aanu ka helay ruux ka mid akhristayaalka bogga rasaas.com.
Waa dhibaato wayn hadii xajiimaalihii uu dadka ka mid noqday sida Mr. Garaabo oo kale. “Waxaa la yidhi ninkii Kenya Madaxweynaha ka ahaan jiray ee JOMO KENYATA ayaa lagu yidhi waxwalba qabiilkiina Kukuuyada ayaa ubadan, Wasiirada, saraakiisha, ganacsiga, shaqaalaha iyo meelwalba, Wuxuu ugu jawaabay XABAALAHANA IYAGAA UBADAN waayo hadii Ilaahey SWTC badiyey reerkan la caayayo maxay yeeli SUDHAYO ama Miyaad ogtihiin in shimbirka COOMAADIGA AH AY GARAABO ISKU QOLOYIHIIN? Coomaadigu Lafa ayuu xagxagtaa aadna wuu u foolxunyahay.
Nimankani waa nimankii yidhi, GEELA MAGAN-DABAGAAB KUWA DARISKA AH KUWA DABAYAAL YAANU DABANAAL. Nin La yidhaahdo Maxamed Xuseen Gaas ayaa lagu yidhi waxaa ku caayayey niman kooxda SUDHAYO ka mid ah, wuxuu yidhi, nin markuu wadankii joogay seeto lahaa oo seetadii ka yimid oo kaligii soo dhoofay maxaan kala hadli”.
Mr Garaabo, waxaan filayaa nin sheekada soo qoray waxaa uu ula jeedaad garaabo, waaa riti xadhigii goostay oo uu maqlay xoriyada baal dalalka reer galbeedka taala. Sidii Xabshidii xabashidii saxarada dariiqyada Addis Ababa la fadhiisatay ee kolkii la waydiiyey maxaad ugu saxarooteen dariiqana yidhi waa dimoqraati.
Dimoqraatiyadu waa wanaaga iyo adiga oo dawgaaga garta dadka kalena aan ku xad gudbin, wixii xad gudub kugu sameeyana wuxuu yahay u sheega sida ay sameeyeen dadweynah la xidhiidha rasaas.com
Hogaamiye Kooxeedka Jwxo-shiil oo Warkiisa Muddo La la,a Yahay, Kulan Dhexmaray Ina Dhuubo iyo Hoggmiye Kooxeed Reer Muqdisho ah
Jwxo-shiil oo Dhaawac Culus ah oo Dubai Dad Dhulbahante ahi Keeneen!